The Ab Presents Nepal » रेखा थापाको यसरी धुमधाम संग दोस्रो बिवाह हुँदै… दुलाह यस्तो हुनेछ।
रेखा थापाको यसरी धुमधाम संग दोस्रो बिवाह हुँदै… दुलाह यस्तो हुनेछ।
यस्तै छवि ओझसँग केहीबर्ष अघि उनको डिभोर्स भएको थियो । अहिले रेखालाई विवाह केहिले गर्ने ? बच्चा कहिले जन्माउने ? भन्ने खालका प्रश्नहरु सोधिने गरिन्छ । उमेरले ३५ नाघिसकेकी रेखाले आफ्नो विवाहको बारेमा कडा जवाफ दिएकी छिन् ।
उनले फ्यानलाई डन्ट वरी म विवाह गर्छु भनेकी छिन् । यो कुरा सुन्दा उनका फ्यानमा उनको विवाह कहिले हुन्छ भनेर उत्सुकता जाग्नु स्वभाविकै हो । रेखाले आफू ४० कटेसी विवाह गर्ने बताएकी छिन् । उनी अबको ४ बर्षजति मज्जाले राजनीति र चलचित्र क्षेत्रमा रमाइलो गर्ने र त्यसपछि मात्र विवाह गर्ने सोचमा रहेकी छिन् ।
सुन्दरनगरी पोखराका बारेमा कस्लाई चासो नहोला र ? पोखराका हरेक पक्ष रमणीय छन्, रोमाञ्चक छन् अनि रहरलाग्दा पनि छन् । यसैबीचमा पोखरामा अर्कोपनि गौरव गर्न लायक पक्ष थपिदैछ । पोखराले थप्न लागेको अर्को विषय हो, पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल ।
धेरैलाई लाग्नसक्छ, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको काम रेल र पानीजहाज जस्तै फन्डामात्र हो । तर, पोखरा बिमानस्थलको काम युद्ध स्तरमा भइरहेको छ । जुन हेर्दा जो कोही चकित पर्न सक्छन् ।
औपचारिक रुपमा २०१७ नोभेम्बर वाट बिमानस्थलको काम सुरु भएको हो । निर्माण कम्पनीका अनुसार २०२१ जुलाइसम्ममा काम सक्नु पर्ने सर्त रहेकोमा कम्पनीले २०२० को डिसेम्बरमा नै बिमानस्थल जिम्मा लगाउने लक्ष्य राखेको छ ।यो बिमान धेरै अर्थमा नवीन प्रकारको हुनेछ । जसरी पोखरा आफैंमा सुन्दर छ । त्यसैगरी बिमानस्थल पनि सुन्दर हुनेछ । काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थललाई बुटिक रंगशाला बनाउने योजना भएपनि पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल पनि आफैंमा बुटिक बिमानस्थल बन्ने भएको हो ।
यसको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको तपाई एक ठाउँमा उभिएपछि तपाईलाई सिस्टमले सिधै जहाजसम्म पु¥याईदिन्छ । यसबारे थप बुझ्न केन्द्रबिन्दुकर्मीहरु पोखरा पुगेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएर तयार पारिएको यो